Ny tantaram-pianakaviana Julian Brandt Childhood Plus untold momba ny tantaram-piainana
Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao Football Alemanina Ny tantaram-pianakaviana Julian Brandt Childhood Plus untold momba ny tantaram-piainana
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny lalao baolina kitra izay fantatra amin'ny anaram-bosotra "Baby Face Jewel". Ny tantaran'i Julian Brandt momba ny tantaram-pahaterahana sy ny tantaran'ny tantaram-piainana tsy fantatra dia mitondra fitantarana feno momba ireo zava-nitranga voamarikao hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny famakafakana dia ahitana ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fifandraisany amin'ny fiainana, ny fiaviana fianakaviana ary ny maro momba ny OFF-Pitch (tsy fantatra) momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra fa nafindra toerana izy Leroy Sane ao amin'ny Fiadiana ny Amboara Eran-tany FIFA 2018 Joachim Low. Na dia izany aza, mpankafy vitsivitsy ihany no mahafantatra betsaka momba ny Bio Bio Julian Brandt izay tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao tsy misy adieu intsony, andao hanomboka.
Julian Brandt Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -Fiainana tany am-piandohana & fianakaviana
Julian Brandt dia teraka tamin'ny 2nd ny volana May 1996 ho any amin'ny reniny, Heike Brandt (mpikarakara trano) ary rain'i Jürgen Brandt (mpitantana ny baolina kitra) any Bremen, any avaratr'i Alemaina Andrefana.
Julian Brandt dia teraka tao amin'ny fianakaviana iray nambinina. Natsangana tany Bremen, Alemana niaraka tamin'ireo rahalahiny hafa izy Joscha Brandt ary Jannis Brandt sary etsy ambany.
Ny fianakavian'i Julian Brandt dia mpilalao baolina kitra ary manan-danja amin'ny lehilahy. Tahaka ny an'i Julian zokiny lahy, ireo rahalahy Brandt roa voalaza terỳ aloha dia nilalao baolina kitra nandritra ny fahazazany.
Ny rain'i Julian Brandt, Jürgen Brandt izay mpitsoa-ponenana SSV Vorsfelde teo aloha dia mpanazatra ekipa ekipa enina alemana SC Borgfeld (Transfer Market Report). Jürgen na dia teo aza ny fanoloran-kevi-pitantanana azy dia nanao asa ho an'ny zanany lahy.
Julian Brandt Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -Relationship Life
Ao ambadiky ny lehilahy lehibe rehetra, misy vehivavy tsara, na izany no fitenenana. Ary ao ambadiky ny saika mpikamban'ny tarika Golden alemana, misy sipa mahafinaritra. Ny fahafantarany ny fiainany manokana nataon'i Julian Brandt dia manampy amin'ny fananganana sary feno azy.
Ny anaran'ilay sipany mahafinaritra an'i Julian Brandt dia i Emily izay misy sary etsy ambany miaraka amin'ny lehilahy eo anoloan'ny lanitra hariva any Hamburg.
Talohan'ny nifaneraseran'izy ireo, Julian Brandt dia nahafinaritra nandritra ny fotoana nahaterahana noho izy nifantoka tamin'ny fananganana ny asany fa tsy fifandraisana. Ny tsy fisian'ny vaovao mifandraika amin'ny fiainany taloha na ny sipany dia nanoso-kevitra ny fifandraisana voalohany dia i Emily.
Julian Brandt Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -Tatitra manokana
Ny ray aman-drenin'i Julian Brandt, anisan'izany ny rahalahiny, dia efa mazoto sy miorina tsara. Amin'ny marika manokana manokana, i Julian dia olona tia ny hijinja ny vokatry ny asa.
Julian Brandt dia azo antoka, manam-paharetana, azo ampiharina, manolo-tena, tompon'andraikitra ary matanjaka. Izy dia fahatsapana, manintona ary mihevitra fa sady manohina sy manandrana no tena zava-dehibe amin'ny eritreriny. Ankoatra izany, dia miorina sy mafana fo izy. Ny fialam-boly ataony dia ny milalao baolina kitra, mijery horonantsary (TV Series) ary milalao FIFA.
Ao amin'ny fanamarihana farany ny fiainan'i Personal Life Julian Brandt dia fantany fa matahotra ny fiovana tampoka eo amin'ny sehatry ny asany, ny fahasarotan'ny fifandraisana ary ny tsy fahampian-tsakafo.
Julian Brandt Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -Karohy amin'ny famintinana
Nafana fo i Brandt tamin'ny nilalao baolina kitra tamin'ny andro fahazazany ary nanomboka niasa tany amin'ny rafitra tanora izy tamin'ny SC Borgfeld tamin'ny taona 2001 tamin'ny taona 5. Nandany nandritra ny taona 9 tao amin'ny fikambanana izay nandrobona ny laharan'ny tanora rehetra.
Ity ambany ity ny sarin'i Julian Brandt nandritra ny taona nanaraka tao amin'ny klioban'ny klioban'ny SC Borgfeld.
Brandt amin'ny fikarakarana misimisy kokoa ary manana traikefa bebe kokoa dia nanapa-kevitra ny handao ny klioban'ny tanàna ao 2009. Taorian'ny fisedrana nahomby dia nanaiky ny FC Oberneuland izy, nilalao nandritra ny roa taona (2009 hatramin'ny 2011) ary nanao anarana ho azy.
Taorian'ny nahombiazany dia naniry ny hahavitan'ny fanantenany tanora i Brankt tamin'ny klioba an-tampony anglisy iray. Izany dia nitarika fiovana avy amin'ny FC Oberneuland ho an'ny VfL Wolfsburg. Tao amin'ny club, nandroba ny tanjona 27 tao amin'ny lalao 48 izy nandritra ny vanim-potoana roa izay nahita ny toerany nandresy ny ligin'ny tanora. Nahitana ny fiafaran'ny asa maha-tanora azy tao 2013. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Julian Brandt Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -Nampidirina tao amin'ny Taranaka Golden Generation
Mijoro eo anivon'ireo ankizy alemà hafa be dia be i Julian Brandt, ary azo antoka fa heverina ho iray amin'ireo fitaovam-piadiana mahery vaika indrindra eran-tany.
Toy izany koa i Brandt Timo Werner, Joshua Kimmich, Niklas Süle sy Goretzka dia heverina ho anisan'ny tarika mpilalao baolina kitra any Alemaina.
Julian Brandt Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -Tanjaka sy fahalemena
hery: Julian Brandt dia mpivarotra haingam-pandeha roa vita amin'ny tongotra maoderina izay fepetra amin'ny andro maoderina. Tsara toetra amin'ny sehatra matanjaka izy ary tena manan-danja indrindra, mahery noho ny endriny malefaka.
fahalemena: Niaiky i Brandt fa vao haingana izy "Fiarovana sy fahaiza-manao" dia faritra tena ilainy hanatsarana azy io.
FACT CHECK: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaram-pianakavian'i Julian Brandt momba ny tantaram-pianakaviana sy ny zava-misy tsy fantatra. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery tsara ato amin'ity lahatsoratra ity ianao, azafady azafady ny fanamarihanao na manontania anay !.
Alexander Isak Tantara Mitantara Ny Zava-Bita Tsara Indrindra
Jadon Sancho tantaram-pitiavana momba ny tantaram-pitiavana tsy hita isa
Ny tantaran'i Marco Reus Childhood Plus untold momba ny tantaram-piainana
Ny tantaran'i Jurgen Klopp Childhood Plus Plus momba ny tantaram-piainana